A Hmunmi Dawtnak Sernak Dingah Zulhdingmi Thil Biapi Pahra(10)…. Minutes3Na caan Pek in Rel ve hmanh. Na Ngaichih lai lo.. – Onlinenungak
A Hmunmi Dawtnak Sernak Dingah Zulhdingmi Thil Biapi Pahra(10)…. Minutes3Na caan Pek in Rel ve hmanh. Na Ngaichih lai lo..
ခိုင်မြဲတဲ့ အချစ်ရေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ချင်ရင် ဒီအချက် (၁၀)ချက်ကို လိုက်နာပါ
Relationship တစ်ခုတည်ဆောက်ရာမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့ တူညီတဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေပဲ ပါဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး။
အစပိုင်းမှာတော့ အဲဒီ့ (၂) ချက်ကြောင့် ချစ်ကျွမ်းဝင်သွားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်တည်လာတဲ့ အချစ်ကို ရေရှည်တည်မြဲစေချင်တယ် ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားလိုက် နာစရာတွေ များလာပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အသေးအဖွဲ နားလည်မှု လွဲတာလေးတွေကအစ လမ်းခွဲပြတ်စဲတာတွေ အထိ ဖြစ်လာနိုင်စေလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ လက်တွဲမြဲချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီ (၁၀) ချက်ကို လိုက်ညှိပြီး လုပ်ကြည့်နော်။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သင့်ချစ်သူကိုလည်း တွဲလာရင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ ပြစ်ချက်တွေ တွေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့ကို ချစ်လို့ပဲ ရွေးပြီးပြီ မဟုတ်လား။ အပြန်အလှန် တတ်နိုင်သမျှ ညှိနှိုင်းပြီး တစ်ယောက်ပြင်စေချင်တာတွေကို တစ်ယောက်က တတ်နိုင်သလောက်ပြင်ရင်း မပြင်နိုင်တာဆိုလည်း လက်ခံလိုက်ပြီး နားလည်ပေးလိုက်ပါ။
(၂) နှစ်ဦးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကို အချိန်ပေးဆွေးနွေးပါ
RS တစ်ခုတည်ဆောက်ရင်း ကြုံတွေ့လာရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ နှစ်ယောက်စလုံးက စကားပြောပေးဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် စိတ်ဝင်စား၊ စကားပြော၊ နားထောင်တာမျိုးတွေ ရှိသင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ရိုးသားစွာ ဖော်ပြခြင်းက ခိုင်မြဲတဲ့ အချစ်ရေး တည်ဆောက်ရာမှာ အရေးပါပါတယ်။ ပွင့်လင်းပြီး ရိုးသားတဲ့ အချစ်ရေးတွေဟာ အဆိုးတွေကို ပယ်ရှားနိုင်ပြီး ပိုခိုင်မြဲပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ့်အချစ်ရေးအတွက် ကိုယ့်အတ္တကို စွန့်လွှတ်သင့်တဲ့ အချိန်ဆိုတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ အချိန်တိုင်းမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်သလိုပဲ မဖြစ်နိုင်တာကို အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းရင်း နားလည်လာမှာပါ။ ကိုယ်မနိုင်နိုင်အောင် ငြင်းနေလို့ ပြီးသွားမယ့် ပြဿနာမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အဲဒီ့ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက်မပြောတော့ဘဲ မေ့ပစ်လိုက်တာမျိုးတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။
RS တစ်ခု ခိုင်မြဲလာဖို့ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုက အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ချစ်သူရဲ့ အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပါ ယုံကြည်မှု ရှိပေးသင့်ပါတယ်။ တစ်ခါ သံသယဝင်လိုက်ရင် အမြဲသံသယဝင်ချင်နေပြီး ယုံကြည်မှု ပြိုလဲသွားခဲ့ရင် ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ မလွယ်တာကြောင့်ပါ။
(၆) နှစ်ယောက်အတူ အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ ဖြတ်သန်းပါ
စကားတွေ ပြောကြ၊ လျှောက်လည်ကြ၊ ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ကြရင်း နှစ်ယောက်အတူ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချိန်တွေကို အတူဖြတ်သန်းပါ။ ပျော်ရွှင်စရာတွေ၊ စိတ်အပန်းဖြေစရာတွေ အတူလုပ်ကြရင်း အချိန်ကုန်ဆုံးတာက အချစ်ရေးကို ပိုခိုင်မြဲလာစေပါတယ်။
(၇) အတူတူ ရယ်မောကြပါ
စိတ်ပညာအရ ချစ်သူတွေဟာ အတူတူရယ်မောပျော်ရွှင်ကြတဲ့ အချိန်တွေကို အတူကုန်ဆုံးရင် အချစ်ရေးက ပိုမိုခိုင်မြဲပါတယ်တဲ့။ ရယ်မောခြင်းက နှစ်ဦးကြားက တင်းမာမှုတွေကိုလည်း လျော့စေပြီး စိတ်လက် ပေါ့ပါးစေပါတယ်။ ဖြစ်သမျှ ပြဿနာတွေကိုလည်း ပြေပျောက်စေပြီး သင့်ချစ်သူနဲ့အတူ ပြုံးပျော်စေပါတယ်။
အချစ်ရေးကို ခိုင်မြဲအောင် တည်ဆောက်လိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ သင်တို့နှစ်ဦးရဲ့ အနာဂတ်ကို စဉ်းစားပြီး အပြောနဲ့အလုပ် ညီအောင် လုပ်ခြင်းက တစ်ဦးပေါ် တစ်ဦး လေးစားရာလည်း ရောက်သလို မေတ္တာတွေလည်း ပိုလာစေမှာပါ။
(၉) တောင်းပန်စကားနဲ့ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောတတ်ပါစေ
သင်တို့နှစ်ဦးက ဘယ်လောက်ပဲ ရင်းနှီးရင်းနှီး တစ်ယောက်အတွက် တစ်ယောက် လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ အသေးအဖွဲလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်ခြင်းတွေ၊ အသေးအဖွဲ အမှားလုပ်မိတာလေးတွေအတွက် တောင်းပန်စကား ဆိုလိုက်ခြင်းတွေက နှစ်ဦးကြားမှာ ကြည်နူးစရာ ဆက်ဆံရေးကို ဖြစ်ပေါ်လာစေမှာပါ။